Imingcele ibukhoma ngo-01: Imingcele ngokukhangisa nge-imeyili ye-Amazon Martech Zone
ULwesine, April 5, 2007 NgoLwesihlanu, January 12, 2018 Douglas Karr
Uma ungenaso isitolo seBorder eduze kwakho, ngiyaxolisa. Uma wenza kanjalo, ungahle uthande leli sayithi eliqaliswe yiBorder, Borders Live at 01:
Wow… izincwadi, umculo obukhoma ne Ikhofi Elihle KaSeattle! Lokho kufana nezulu kimi!
Kubonakala futhi ukuthi Imingcele Iphephandaba i-imeyili lithole ukulungiswa okukhulu, kumnandi ngempela ukufunda manje. Imingcele iyanqoba impi ye-imeyili! Bheka lokhu kuqhathanisa ne- Ama-Amazon imeyili:
Tags: Amazonimingceleukwakheka kwe-imeyiliukwenza ngezifiso i-imeyili
Ababonisi, Osonkontileka kanye nabasebenzi: Silibangise kuphi?
Ngo-Apr 5, i-2007 ku-10: 36 AM
Kuyamangaza ukuthi ukuguqula ukwakheka kwakho kungakwenzelani incwadi yezindaba / iwebhusayithi yakho ye-imeyili. Kungakususa ku-blah kuye ekujabuliseni! Benze umsebenzi omuhle kakhulu!
Ngo-Apr 6, i-2007 ku-7: 18 AM
Ngiyavuma benze umsebenzi omuhle! Sengizizwa ngizwa iphunga lekhofi. hhawu ukuthi ekhishini! Kahle ngiyawuthanda umqondo I!